Ny dikan'ny Tarot Card sy ny fandikana ny karatra Tarot 78 rehetra - Ny Dikan'ny Karatra Tarot
Hevitra sy fandikana ny karatra Tarot
Tongasoa eto amin'ny fanangonana exposive isan'andro an'ny Horoscope Astros an'ny Ny dikan'ny karatra Tarot, ny tandindona ary ny teknika famakiana tarot !
Fetiben'ny cartomancy io!
Ho hitanao eto ny sasany amin'ireo ny ankamaroan'ny fandikana tarot lalina misy ankehitriny . Fanampin'izay, ny fandikana tarot rehetra sy ny famakiana tarot 'ahoana' dia mifototra amin'ny zavatra niainako manokana nandritra ny am-polony taona maro.
Aza misalasala Mifandraisa amiko raha manana fanontaniana ianao!
Ny dikan'ny karatra Tarot dia ny atiny
Inona no ao amin'ny Tarot Deck
Akanjo Tarot (Kapoaka, Pentaketa, Tady, sabatra)
Ahoana ny fomba fiasan'ny Tarot
Tarot dia iray amin'ireo rafitry ny sikidy amin'ny antsipiriany indrindra misy, ary iray izay azon'ny rehetra ifandraisana. Ny fianarana ny Tarot dia fomba mahafinaritra iray hampivelarana ny fisainanao ary hijanona hifaneraserana amin'ireo fitaovana esoterika nomem-potoana ho an'ny fitomboana ara-panahy sy fifohazana!
Mahazatra Tarot deck dia manana karatra 78 ary miorina amin'ny andiana kara-pilalaovana mahazatra. Mizara sokajy 2 ankapobeny (Major Arcana & Minor Arcana) sy 4 ‘subcategories’ (ny amboara, Pentacles, sabatra, wands) ny tokotanin-tsambo.
inona ny planeta mihemotra ankehitriny
Karatra 22 no mandrafitra ny Major Arcana (Cards amin'ny fitsarana amin'ny tokotanin-tseranana mahazatra).
Ny Major Arcana dia namboarina mba hifamatoran'ny tsirairay amin'ny iray amin'ireo archetypes natolotr'i Jung miaraka amin'ny Tree of Life, ampahany amin'ny I-Ching ary na dia i Runes aza.
Raha ampitahaina ny ankamaroan'ny mpamaky dia mahita ny Cards Court ho olona eo amin'ny fiainan'ny mpitady, na angamba singa amin'ny toetrany no lohalaharana.
56 ny karatra ao amin'ny Arcana kely .
Ny Minor Arcana dia voasokajy kokoa amin'ny akanjo 4 - kaopy , Pentacles , SABATRA , Wands .
*** Mariho fa ny mpanoratra sy ny mpanao sary sasany dia miantso ny akanjo amin'ny anarana samy hafa (ohatra ny akorandriaka fa tsy kaopy raha Tarot miorina amin'ny rano), fa ny sary an'ohatra ifotony kosa. ***
Topimaso Tarot Suits
Ny tarot tarot dia taratry ny zava-mitranga sy toerana isan'andro.
Ny tsirairay amin'ireo palitao 4 tarot dia samy manana ny mampiavaka azy sy ny fifandraisana misy amin'ireo Singa 5 , Fanandroana & Zodiaka , Toro-lalana kardinaly ary Seasons. Ny fifandraisana metafizika sy ara-panahy rehetra voatanisa ao amin'ny famaritana karatra tarot tsirairay ary ampifandraisina amin'ny pejy mifanaraka amin'izany.
Suit ny kapoaka - maneho ireo singa mampihetsi-po amin'ny fiainantsika sy ny tenantsika ara-tsaina.
Fiampangana amin'ny Pentekôla - mifehy ny raharaha rehetra misy eo amin'ny lafiny ara-bola sy vola, fahasalamana ary famoronana.
Valin'ny sabatra - mifehy ny saina, ny fomba fahitana ary ny fandraisana fanapahan-kevitra (ao anatin'izany ny tolona izay manaraka matetika).
Suit of Wands - manana singa mavitrika, momba ny zavatra mihetsika na miasa io.
Matetika ny famakiana tarot dia misy olona roa - ny iray mametraka fanontaniana ary ny iray izay mamaky ireo karatra. Ilay olona manana fanontaniana dia manetsiketsika ny tokotanin-tsambo, mieritreritra an'io fanontaniana io ary manapaka azy. Avy eo ny mpamaky dia manoratra karatra maromaro napetraka amin'ny lamina manokana ary adika ho an'ilay querent.
Ny majika, raha sitrakao dia ny fomba anehoan'ny karatra ny eritreritr'ilay mpanontany. Raha ny fomba fijerin'ny Light Worker dia eritreretina izany ny mpamaky dia mampiasa ny tarot ho tetezana mankany amin'ny Ambony ary ny fitadidiantsika fanahy.
Ny karatra tarot tsirairay dia mitantara tantara iray ary izany dia iray amin'ireo rakitra tahiry marobe ao amin'ny Daily Horoscope Astros dia hanampy anao hahay hamaky.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Tarot dia tadidio fa ny karatra dia samy afaka mitantara tantara iray, ny andiana karatra dia manome antsipiriany bebe kokoa momba an'io tantara io - fa ny taratra Tarot iray manontolo koa dia manana singa iraisana izay miresaka ny iraisan'ny rehetra amin'ny traikefa mahaolona, ​​na amin'ny endrika fisainana na fihetsem-po.
Izany no antony tena zava-dehibe ny misafidy tokotanin-tsambo misy sary miresaka ny lalanao ary archetypes izay mifandray manokana ianao .
Afaka manao psychic ahy ny karatra Tarot
MILA ny Tarot hidirana amin'ny hibitsibitsika masina ve ianao na ny Tari-dalanao anaty?
Na izany aza, imbetsaka ny olona no voasakana. Tsy azon'izy ireo atao ny mamadika ny tena sy ny tontolo mivaingana ho zavatra tena voajanahary sy voaorina amin'ny finoana. Eo no idiran'ny fitaovana sikidy. Manampy antsika hiditra amin'izany angovo famoronana sy intuitive izany izy ireo ary hahita zavatra mazava kokoa. Tamin'izany no nanomboka nipoitra avy amin'ny zavatra toa kisendrasendra ny tantaran'ny famakiana tarot.
Tantara Tarot sasany
Tsy dia fantatra loatra ny momba ny karatra Tarot ankoatry ny fahitantsika azy ireo niresaka momba ny taonjato faha-15, Italia ho isan'ny lalao antsoina hoe Triumph.
Ny karatra tarehin'ny Tarot dia nampiana amina tokotanin-tsoroka ho carte trompetra, ilay zavatra rehetra dia nitovy tamin'ny lalao Bridge. Nanjary malaza be ny lalao Triumph ary vetivety dia niparitaka tamin'ny faritra hafa any Eropa.
Tamin'ny faramparan'ny taona 1700 vao niseho manerana ireo karatra ireo mpanao asan'ny maizina ary nahita ny mety ho an'ny sary mihoatra ny lalao atoandro. Mety ho izany dia nitranga tamin'ny ampahany tamin'ny boky cartomancy tamin'ny taona 1770 nataon'i Etteilla, nametraka ny dingana ho an'ny fitaovana fitadiavam-bola efa vita ofisialy lavitra kokoa izay misy ny fifanoratana amin'ny abidia hebreo sy ny hevitra miorina amin'ny mistisisme Cabalistic.
Tamin'ny taonjato faha-20, ny Tarot dia nitazona fiarahamonina esoterika isan-karazany, anisan'izany ny Order of the Golden Dawn.
Nanomboka tamin'izay fotoana izay, ny fampiasana ny Tarot dia nitombo tamin'ny toe-javatra metafizika. Drafitra vaovao an-jatony maro miaraka amina lohahevitra maro karazana no noforonina, ka manamora ny fahitan'ny mpikaroka ny tokotanin-tsambo izay miresaka amin'izy ireo amin'ny sehatra lalina.
Ahoana no ahafahan'ny Tarot Cards manampy amin'ny fananganana ny fanahiko tsara tarehy
Ny olona sasany mihomehy ny hevitra amin'ny fampiasana karatra ho fomba ahazoana valiny amin'ireo fanontaniana sy safidy maro amin'ny fiainana. Na izany aza, rehefa mihevitra azy ho fitaovana manokatra ny atinao ianao mamantatra ny hoavy misy dikany bebe kokoa.
an'ohatra dia mahery vaika tokoa, ary ny sary ao amin'ny tarot dia manandrana manendry ilay Collective Unconscious izay mampifandray antsika amin'ny toerana sy habaka rehetra, ao anatin'izany ny firaketana ny Akashic.
Ny lakilen'ny ankamaroan'ny olona dia ny mianatra mandika sy mampihatra ny vaovao nambara.
Tsy dingana haingana io. Raha mitady fiara amin'ny alàlan'ny rafitra sikidy ianao - tsy ho anao ny Tarot. Na izany aza, raha mitady rafitra iray izay tsy vitan'ny fanitarana ny fahatsiarovanao fotsiny fa koa taratra sy ampio anao amin'ny dianao ara-panahy dia mahazo aina ianao ary mamakia hatrany.
Manohana ny fianaranao
Rehefa mandinika ny tarot ianao dia manampy amin'ny fanaovana diary Tarot ny tenanao. Eto ianao dia afaka mametraka ny fisaintsainana sy fahitana voangona isaky ny karatra na mamaky ary manome refy lehibe kokoa an'ireo zavatra niainanao nandeha.
Ho hitanao ao anatin'ny andro sy taona ho avy fa afaka miverina amin'ity boky ity ianao ary mahita fomba fijery vaovao avy amin'ireo naoty ireo. Izany dia satria mitombo amin'ny maha-fanahy anao ianao ary manitatra ny fahaizanao ara-tsaina miaraka amin'ny tarot sy Daily Horoscope Astros ho mpitari-dalana.
Matoky izahay fa mahita ny vaovao voadinika am-pahazotoana ao amin'ireto pejy ireto manohana ny dianao.
Aquarius vehivavy sy vehivavy virgo finamanana
milamina ve ny libra sy leos
firaisana ara-nofo ny lahy sy ny vavy virgo
pisces lehilahy capricorn vehivavy eo am-pandriana